Network | Mandalar.Net
Posted by: Mandalar.Net on: December 2, 2009
အရင်အပတ်တွေက CCProxy Installation နဲ့ Option Configuration အကြောင်းရေးသားပေးခဲ့ပြီးပါပြီ အခုတစ်ပတ်ကတော့ Account Management နဲ့ ပတ်သက်ပြီးရေးသားပေးသွားပါ့မယ်။
CCProxy ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Internet အသုံးပြုတယ့် User တွေကို Control လုပ်လို့ရပါတယ် အဲ့လို Control လုပ်ဖို့အတွက် Account Management ကိုသိရှိနားလည်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်၊ Account Management ကို နားလည်သဘောပေါက်သလောက်ကို အသေးစိတ်ရေးသားပေးသွားပါ့မယ်။
Account Management ကိုအသုံးပြုဖို့ CCProxy Main Windows ထဲက Account Manager ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Account Manager Dialogbox ကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Permit Category မှာဆိုရင် ရွေးချယ်စရာ ၂ခုရှိပါတယ် တစ်ခုက Permit All နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ Permit Only ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Permit All ကတော့ အခုလက်ရှိအသုံးပြုထားတယ့် CCProxy ကိုအသုံးပြုပြီး Network ထဲက ဘယ် User (Client) ကိုမဆို Internet ပေးသုံးချင်တယ်ဆိုရင် အသုံးပြုရမယ့် Option ပါ။ Permit Only ကိုတော့ Network ထဲမှာရှိတယ် User (Client) တွေကို ဘယ်သူ့ကိုတော့ ပေးသုံးမယ် ဘယ်သူ့ကိုတော့ ပေးမသုံးဘူး စတယ့် User (Client) တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိန်းချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရတယ့် Option တစ်ခုပါ။
Auth Type ကတော့ CCProxy ကိုအသုံးပြုရာမှာ အသုံးပြုခွင့်ရှိမရှိဆိုတာကို IP Address, MAC Address and User/Password စတာတွေနဲ့ စစ်ဆေးပေးလို့ရပါတယ်။
Web Filter ကိုတော့ ဘယ် Website တွေကို User (Client) တွေကိုပေးသုံးမယ် ဘယ် Website တွေကိုတော့ User တွေကို ပေးမသုံးဘူးစတာတွေကို သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်။
Time Schedule ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ User (Client) တွေရဲ့ Internet အသုံးပြုချိန်တွေကို စိတ်ကြိုက် ထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်။
New, Edit, Delete and Select All စတယ့် Buttons တွေကတော့ Account List ထဲက User Account တွေကိုပြင်ဆင်မှုလုပ်ရာမှာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်
Auto Scan ကိုအသုံးပြုပြီး LAN ထဲမှာရှိတယ့် Computer တွေရဲ့ computer name, IP adress နဲ့ MAC address စတယ့် Information တွေကိုသိချင်တယ့် အခါမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်
Export and Import ကိုတော့ Account List ကို Export ပို့တယ့်အခါ Export လုပ်ထားတယ့် file တွေကို Import လုပ်တယ့်အခါတွေမှာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ Account List ကို Backup လုပ်တာ Restore လုပ်တာနဲ့သွားဆင်တူပါတယ်။
NT User Auth ကတော့ Active Directory တင်ထားတယ့် Domain Server ထဲက Domain Account တွေကို Account List ထဲကိုပေါင်းထည့်တယ့် နေရာမှာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ။Domain Server Base Network မဟုတ်ရင်တော့ သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Flow Stats ကတော့ Account တစ်ခုချင်းစီက အသုံးပြုထားတယ့် Download နဲ့ Upload တွေကို byte နဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ။Advance Option ထဲက Enable Flow Stats Checkbox ကိုမရွေးခဲ့ရင်တော့ ပြပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Account အသစ်ဖွဲ့ချင်ရင်တော့ Permit Category ထဲမှာ Permit Only ကိုရွေးပြီး New ကို Click နှိပ်ပါ။
Enable ကိုတော့ Account တွေကို enable ဒါမဟုတ် disable လုပ်တယ့်နေရာမှာသုံးပါတယ်။
User/Group Name ကတော့ User name ဒါမှမဟုတ် Group Name အနေနဲ့ CCProxy ကိုအသုံးပြုရာမှာ အသုံးပြုခွင့်ရှိ/မရှိကို စစ်ဆေးရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။
Password ကိုတော့ ပေါ် User Name ထဲက User အတွက် Password သတ်မှတ်ရာမှာသုံးပါတယ်။
IP Address/IP Range ထဲမှာတော့ User Name ထဲက User အသုံးပြုမယ့် Computer ရဲ့ IP Address တစ်ခုထဲဒါမှမဟုတ် IP range တစ်ခုကို သတ်မှတ်ရာမှာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ For example: 192.168.0.1 or 192.168.0.1-192.168.0.10.
MAC Address ကိုတော့ အခုဖွဲ့နေတယ့် User အသုံးပြုမယ့် Computer ရဲ့ MAC Address ကိုထည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် တစ်ကယ်လို့ MAC Address ကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ “?” ကို Click နှိပ်ပြီး ပေါ်လာတယ့် Get Address Box ထဲမှာ Computer Name ဒါမှမဟုတ် IP address ကိုဖြည့်ပြီး Retrieve ကိုနှိပ်ပြီး MAC address ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
As Group ကတော့ အခုဖွဲ့နေတယ့် Account ကို Group အဖြစ် သတ်မှတ်ချင်ရင်အသုံးပြုပါတယ်။
Belongs to Group ကတော့ အခုဖွဲ့နေတယ့် Account ကို ဖွဲ့ပြီးသား Group တွေထဲကိုထည့်သွင်းချင်ရင်အသုံးပြုပါတယ်။
Maximum Connections ကတော့ Account တစ်ခုကို Connection ဘယ်နှစ်လိုင်းပေးသုံးမယ်ဆိုတာ သတ်မှတ်တယ့်နေရာမှာသုံးပါတယ်။ “-1” ကိုတော့ Unlimited အနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။
Bandwidth ကတော့ Account တစ်ခုကို ပေးသုံးမယ့် အမြင့်ဆုံး Bandwidth ကိုသတ်မှတ်တယ့်နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။“-1” ကိုတော့ Unlimited အနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။
WWW, Mail, Telnet, Remote Dial-up, FTP, SOCKS, Others စတယ့် Option ကတော့ Account ကိုပေးသုံးစေချင်တယ့် Services တွေကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Web Filter ကတော့ မိမိ ဖန်တီးထားတယ့် Web Filter ကို Account မှာအကျိုးသက်ရောက်စေချင်တယ့် နေရာမှာသုံးပါတယ်။
Time Schedule ကတော့ မိမိ ဖန်တီးထားတယ့် Time Scheduleကို Account မှာအကျိုးသက်ရောက်စေချင်တယ့် နေရာမှာသုံးပါတယ်။
Auto disable at ကိုတော့ Account ကိုဘယ်အချိန်မှာ Disable လုပ်မလဲဆိုတာကို အသုံးပြုချင်ရင် ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Web Filter ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် Account Manager Windows ထဲက Web Filter ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Web Filter Name ကတော့ မိမိဖန်တီးမယ့် Web Filter Rules ရဲ့ Name အနေနဲ့အသုံးပြုပါတယ်။
Site Filter ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ရွေးချယ်စရာ ၂မျိုးရှိပါတယ် Permitted Sites နဲ့ Forbidden Sites တော့ပါ။ Permitted Sites ကတော့ သုံးခွင့်ပေးချင်တယ့် Web sites တွေကိုသတ်မှတ်ချင်တယ့် နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။ Forbidden Sites ကတော့ သုံးခွင့်မပေးချင်တယ့် Web sites တွေကိုသတ်မှတ်ချင်တယ့် နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။
Permitted Sites ကိုရွေးပြီး Textbox ထဲမှာ *.google.com;???.facebook.com; လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် အဲ့ဒီ Web Filter Rules ဟာ Google နဲ့ Facebook ကလွဲလို့ ကျန်တာကို အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ထားတာနဲ့ တူညီနေပါလိမ့်မယ်။
Forbidden Sites ကိုရွေးပြီး Textbox ထဲမှာ *.google.com;???.facebook.com; လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် အဲ့ဒီ Web Filter Rules ဟာ Google နဲ့ Facebook အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ထားတာနဲ့ တူညီနေပါလိမ့်မယ်။
Forbidden URL ကိုတော့ URLs တစ်ခုချင်းစီ ဒါမှမဟုတ် URLs ထဲမှာပါဝင်လာမယ့် စာသားတစ်ခုချင်းစီကို အသုံးမပြုစေချင်တယ့်အခါမှာသုံးပါတယ်။ Forbidden URL Text box ထဲမှာ http://www.google.com/;*.zip;*.exe;*/mail/; လို့ရိုက်ထည့်ထားလိုက်ရင် http://www.google.com နဲ့ ZIP file extension တွေ EXE file extension တွေနဲ့ mail တွေကို အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ထားတာနဲ့ တူညီပါလိမ့်မယ်။
Forbidden Content ကတော့ ညာဘက်က Test box ထဲမှာရိုက်ထည့်ထားတယ့် စာသား တစ်ခုခု Web page URL ထဲမှာ ရိုက်ထည့်ထားတယ့် စာသားတွေပါဝင်ခဲ့ရင် အဲ့ဒီ Webpag ကိုတားဆီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ sex;sexy လို့ရိုက်ထည့်ထားလိုက်ရင် URL ထဲမှာ sex ဒါမှမဟုတ် sexy ဆိုတာပါခဲ့ရင် အဲ့ဒီ Webpage ကို မပြသပဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Time Schedule (Access Time Control)
Time Schedule ကိုအသုံးပြုချင်ရင်တော့ Account Manager Windows ထဲက Time Schedule button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Time Schedule Name ကတော့လက်ရှိ ဖန်တီးမယ့် Time Schedule Rule ရဲ့ နံမည်ပါ။
Sunday to Saturday ကိုတော့ မိမိပေးသုံးချင်တယ့် နေ့၊ အချိန် စတာတွေကို သတ်မှတ်ပေးရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။
CCProxy Installation, Option Configuration နဲ့ Account Management ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ CCProxy ကိုအသုံးပြုပြီး မိမိတို့ရဲ့ LAN ထဲက User တွေကို Internet Usague နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
CCProxy နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အခက်အခဲတွေဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားမေးမြန်းလိုတာတွေရှိရင် myintnaing.mdy@gmail.com ကို Mail ပို့ပြီးမေးဖြစ်စေ။ https://mandalarnet.wordpress.com မှာ Comment ရေးလို့ပဲဖြစ်စေ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် သိရှိသမျှကိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Tags: internt, Network
XP TCP/IP Repair V.2.0
Posted by: Mandalar.Net on: September 27, 2009
Network နဲ့ဆိုင်တယ့် Software တစ်ခုကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ တစ်ခါတုန်းက ကျွန်တော့ရုံးမှာ ရှိတယ့် Computer တစ်လုံး က နေပြီးတော့ Network Services တွေဖြစ်တယ့် File တွေ Share ပေးတာ/ယူသုံးတာ၊ Printer တွေကို Share ပေးတာ/ယူသုံးတာ၊ Internet အသုံးပြုတာတွေကို သုံးလို့ ရနေပြီးတော့ အဲ့ဒီ Computer မှာ E-Mail ဆွဲချတော့မှ Error လာပြနေတာမျိုးဖြစ်တယ် စဉ်းစားကြည့်တော့ E-Mail Services ဆိုတာက TCP/IP Protocol ထဲ က Socket (Port) နံပါတ် 110 နဲ့ 25 ကိုယူသုံးထားတာ ကိုသွား သတိရတယ်။
အဲ့ဒီ Ports ၂ ခု ကိုဘယ်လို Reset လုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်လိုက်တာ တစ်ရက်မဟုတ်ပဲ နှစ်ရက်လောက် အချိန်ကုန်သွားတယ် ဘယ်လိုမှလုပ်လို့ မရတော့ တယ့် အဆုံး Computer ကို Format ချဖို့ စိတ်ကူးလိုက်တယ်။ သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ Format ချရတာ မတန်ဘူးလို့ တွေးမိတယ်။ ဒါနဲ့ Internet ပေါ်တက်ပြီး ရှာလိုက်တာ TCP/IP ရဲ့ Ports တွေကို Reset ချလို့ ရတယ့် Software တစ်ခု သွားတွေ့တယ် ဒါနဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်တော့ OK သွားတယ်ဗျ။
ဒါကြောင့်မို့ သူငယ်ချင်းတို့ မှာ အဲ့လိုအခက်အခဲများ ဖြစ်ခဲ့ရင် ဦးနှောက်မခြောက်ရအောင် XP TCP/IP Repair ဆိုတယ့် Software လေးကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
Software ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Windows XP Services Pack2တော့ အနည်းဆုံးလိုတယ်။ TCP/IP Protocol တစ်ခုလုံးကို ReInstall လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Reset TCP/IP ကိုနှိပ်လိုက်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ်ပဲ TCP/IP တွေရဲ့ Socket တွေကိုပဲ Reset လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Repair Winsock ကိုနှိပ်လိုက်ပါ၊ ပြီးရင်တော့ ဒီ Software ကို Close Button ကိုနှိပ်ပြီး ပိတ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီအခါမှာ Computer ကို Restart လုပ်ဖို့ လိုတယ့် အကြောင်း Message ပြပါလိမ့်မယ် Yest ကို Click နှိပ်ပြီး Computer ကို Restart ချလိုက်တာနဲ့ TCP/IP နဲ့ ပါတ်သက်တယ့် ဘာ Error မှ မရှိတော့တာ ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အပြည့်အစုံသိချင်ရင်တော့ XP TCP/IP Repair Official Site ကို သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။